Iindaba - Inkampani iqhuba iMfundo ngeMpilo yaseMsebenzini kunye noQeqesho
Inkampani iqhuba iMfundo ngeMpilo noQeqesho eMsebenzini
Ukuze kwandiswe ulwazi lwabasebenzi ngempilo yasemsebenzini kunye nokwandisa ulwazi malunga nothintelo lwezifo emsebenzini, ngokuhambelana neshedyuli yoqeqesho ngokhuseleko luka-2020, inkampani yaphehlelela umxholo wezempilo emsebenzini onomxholo othi “Ukukhathalela Impilo Yabasebenzi kunye noNceda eTshayina esempilweni” igumbi leentlanganiso le-312 ngentsasa ye-9 kaDisemba. Amalungu ekomiti yokhuseleko yenkampani, amalungu e-ofisi yokhuseleko, amagosa aphambili akumgangatho ophakathi, abalawuli beeofisi, abafumana amaxhoba kunye nabanye abasebenzi abatsha bathathe inxaxheba kuqeqesho.
Le nkampani yoqeqesho imeme utitshala uLing Yujing osuka kwiSikhululo saseSichuan seZiko leMfundo yoKhuseleko kunye nezeMpilo ukuba anikele intetho kwindawo. Ngexesha loqeqesho, uMfundisi uLing wasebenzisa inani elikhulu lemifanekiso, iimeko zokwenyani kunye neevidiyo ukushumayela ngokucacileyo nangokucacileyo umxholo wemiba emithathu: Okokuqala, ulwazi lohlangulo olungxamisekileyo, kubandakanya ulwazi lweCPR kwisiza se-cardiopulmonary resuscitation, i-cerebral hemorrhage (cerebral). stroke), kunye nesifo sokuwa. Iindlela zoncedo lokuqala lwezifo, i-myocardial infarction, iindlela eziqhelekileyo ze-hemostasis kunye neendlela zoncedo lokuqala lwe-Heimlich; okwesibini kukwazisa indlela yokuphila enempilo, kubandakanywa ukutya okunengqiqo, ukuzivocavoca okufanelekileyo, ukunciphisa ukutshaya kunye notywala, ukulinganisela kwengqondo, ukulala ngokwaneleyo, njl. Okwesithathu kukuchaza ukuthintela kunye nokuphuculwa kwezifo eziqhelekileyo ezingapheliyo zomsebenzi, kubandakanywa nokuthintela kunye nokunyangwa kwengcinezelo yegazi, ihlombe elifriziwe, i-spondylosis yomlomo wesibeleko, njl., kunye nokwazisa ulwazi lokugcinwa kwezempilo lwamanqaku e-meridian. Kwindawo yoqeqesho, uMfundisi u-Ling Yujing usebenze ngokukhutheleyo nabaqeqeshwayo kwaye wenza umboniso ophilayo, owafumana impendulo efudumeleyo kuye wonke umntu. Imfundo yezempilo yomsebenzi yeyure enesiqingatha ityebile kumxholo, inemifanekiso etyebileyo kunye neetekisi, kwaye indawo yokufunda yenza ukuncwina okothusayo kunye neempendulo kwimibuzo ngamanye amaxesha. Ngolu qeqesho, ayilolwazi lwezempilo lomsebenzi kuphela oluphuculweyo lwabaqeqeshwayo, kodwa kwakhona wonke umntu waqonda ukuba kufuneka anike ingqwalasela enkulu kwiingxaki zempilo yakhe kwaye akhusele “inkunzi yenguqu”.
Ukudala indawo yokusebenza enempilo, ekhuselekileyo, ehambelanayo kunye nezinzileyo, kunye nokukhusela impilo yabasebenzi luxanduva lwentlalo yeshishini. Imfundo yezempilo yomsebenzi kunye noqeqesho lwenkampani ludlale indima entle ekuphuculeni ulwazi lokuzikhusela kwabasebenzi, ukuqinisekisa impilo yabo yomzimba nengqondo, kunye nokuthintela ngokufanelekileyo izifo zasemsebenzini.
Ixesha lokuposa: May-01-2020
Hall Effect inzwa yangoku, Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kwe-Dc yangoku yoVavanyo, I-Hall Effect Ac inzwa yangoku, Ukuchaneka okuphezulu kweSensor yangoku ye-Ac, IHolo Yoluvo lwangoku, I-Voltage yangoku yoVavanyo,